‘कमलेको बिहे’को फर्स्टलुक सार्वजनिक - फिल्मी खबर - साप्ताहिक
अनुपविक्रम शाही तथा सन्ध्या केसी स्टारर फिल्म ‘कमलेको बिहे’को फर्स्टलुक सार्वजनिक भएको छ । बिहिबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच निर्माण टिमले फिल्मको पोस्टर तथा गीत रिलिज गर्यो । कार्यक्रममा मिडियाकर्मीमाझ फिल्मको ट्रेलर पनि देखाईएको छ । तर युट्युवमा भने ट्रेलर जेठ १५ मा मात्र आउनेछ । नामले नै कमेडी बोल्ने फिल्ममा कमलेको भुमिकामा अनुपविक्रम प्रस्तुत छन् भने सन्ध्या चमेलीको भुमिकामा छिन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै निर्देशन प्रसन्न पौड्यालले नेपाली समाजमा चल्दै आएको मागी विवाह र प्रेम विवाहबीचको द्वन्द्वको कथा नै फिल्मको सार रहेको बोले । पछिल्लो पुस्ताका युवा युवतीले आफु खुसी जीवनसाथी खोज्ने क्रम बढ्दो हुादा परिवारबाट त्यसमा उत्पन्न हुने बाधा व्यवधानको प्रभाव फिल्मले बोल्नेछ । निर्देशकको यति कुरा बाहिर आउँदै गर्दा फिल्मको ट्रेलर तथा गीतले प्रश्न छाडेको छ कि, कमलेले चमेलीलाई भगाउन सक्यो कि सकेन् ?
यसअघि अनमोल केसी स्टारर फिल्म ‘ड्रिम्स’मा केमियो रोलमा देखिएकी अभिनेत्री सन्ध्याले ’कमलेको बिहे’लाई डेब्यू फिल्म बोलिन् । ‘ड्रिम्स’मा म केमियो भुमिकामा थिए, यो फिल्म मेरो करियरको लागी डेब्यू हो सन्ध्याले थपिन, ‘फिल्मले अनुभव धेरै दियो, राम्रो टिमसँग काम गर्न पाएँ त्यसको नतिजा पनि राम्रो निस्केको छ हलमा आउँदा दर्शकको आँखा घुम्न दिने छैनौं ।’ अभिनेता अनुप भने कार्यक्रममा कारणबस अनुपस्थित रहे ।
फिल्मलाई अनुभवी छायांकार विदुर पाण्डेले खिचेका हुन् । पाण्डेको हातबाट आधा दर्जन बढि फिल्महरु क्यामेरा कैद भइसकेका छन् । महेश दवाडीको कथा, पटकथा तथा संवाद समावेश ‘कमलेको बिहे’मा अनुप र सन्ध्यासँगै विनोद न्यौपाने, इशान ढकाल, दिपक पहाडी, रेशु तामाङ, कुलद्विप अधिकारी र लिरण लाकौल लिड अभिनयमा छन् । सरिता मुभिज क्रियशनको व्यानरमा बनेको फिल्ममा सरिता लामाको लगानी छ भने कार्यकारी निर्मातामा दिपक विष्ट ‘गौली’ रहँदा लगानीमा साझेदारी प्रतिक तामाङ, सुनिल विष्ट र मिलन लामाले गरेका छन् ।
राजनराज शिवाकोटी, शिखर सन्तोष र वावुल गिरीको संगीत रहेको फिल्ममा समावेश गीतमा शिवाकोटीसँगै माण्डवी त्रिपाठी, युवराज चौलागाईं, समिर आचार्य र अरुणदेव यादवको स्वर छ । सम्राट वस्नेतको द्वन्द्व निर्देशन रहादा नृत्य निर्देशन दिपकमान सिंहले गरेका छन् । तारा थापा ‘किम्भे’ फिल्मका सम्पादक हुन् । दिनेश प्रकाश महरा प्रोडक्सन डिजाईनर रहेको फिल्ममा प्रोडक्सन व्यवस्थापनको काम प्रकाश हमालले गरेका छन् । फिल्मको आधिकारिक रिलिज मिति तय नभएपनि निर्माण टिमले श्रावणमा रिलिज गर्ने बताएको छ । ट्रेलर रिलिजसागै फिल्मको रिलिज मिति पनि सार्वजनिक हुने निर्देशक पौड्यालले बताए । यसैबीच फिल्म ‘कमलेको बिहे’मा समावेश ‘टाकन टुकुन’ बोलको गीत युट्युव रिलिज गरिएको छ । सार्वजनिक गीतमा माण्डवी त्रिपाठी र राजनराज शिवाकोटीको स्वर छ शब्द संगीत पनि शिवाकोटीकै हो।
सुकुलगुन्डाको पोस्टर असार २९, २०७५
कथा काठमाडौंको पोस्टरमा असार २६, २०७५
यो पागल मनको पोष्टर असार २१, २०७५
चि मुसी चिको ट्रेलर असार १८, २०७५
नाईं नभन्नू ल ५ को पहिलो अनुहार असार ११, २०७५
जेठका चलचित्र : सबै फ्लप ! असार ८, २०७५
शिल्पाको एक्शन असार ५, २०७५